စူးအက်တူးမြောင်း၏ကုန်တင်သင်္ဘောအမှတ်တံဆိပ် ၁၉ ခု - သတင်း
ကုန်တင်သင်္ဘောတစ်စီးသည်စူးအက်တူးမြောင်းတွင်ကပ်နေသော်လည်းဤမှတ်စု ၁၉ ခုသည်၎င်းကိုကယ်တင်ရန်ဖြစ်သည်
ကြီးမားသောကုန်တင်သင်္ဘောသည်အီဂျစ်ရှိစူးအက်တူးမြောင်းတွင်ပိတ်မိနေသည်။ ၎င်းသည်ကမ္ဘာပေါ်တွင်ကုန်သွယ်မှု၏ ၁၂ ရာခိုင်နှုန်းခန့်ဖြတ်သန်းသွားသည်နှင့်အတူကမ္ဘာပေါ်တွင်အလုပ်အများဆုံးသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးလမ်းကြောင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဤကွန်တိန်နာသင်္ဘောသည်၎င်းကိုပိတ်ဆို့နေပြီး၎င်းသည်ရှင်းလင်းရန်ရက်သတ္တပတ်များစွာကြာနိုင်သည်။ သိသာထင်ရှားတဲ့ဒီမည်သူမဆိုများအတွက်စံပြမဟုတ်ပါဘူး, ဒါပေမယ့်အဘယျသို့ကမှမွေးဖွားတော်မူပြီတစ် ဦး ဖြစ်ပါတယ် အများကြီး စူးအက်တူးမြောင်းကုန်တင်သင်္ဘောနှင့်ပတ်သက်သောမှတ်စုများ။
စူးအက်တူးမြောင်းထဲမ ၀ င်ခင်လေးမှာဒစ်ခ်လို့ခေါ်တဲ့အရာကိုသာဆွဲတင်ခဲ့တယ်။ ဒါကိုမင်းကြည့်ကြည့်ပါ
ထပ်မံပြောကြားလိုသည်မှာကမ္ဘာ့ကုန်သွယ်မှု၏ ၁၀ ရာခိုင်နှုန်းခန့်သည် ၂ ရက်ကြာရပ်တန့်သွားစေပြီးကုန်တင်သင်္ဘောတစ်စင်းသည်ပင်လယ်နီတွင်dရာမဒစ်ကိုဆွဲထုတ်ပြီးနောက်စူးအက်တူးမြောင်းတွင်ဘေးချင်းယှဉ်။ လည်ပတ်နေသောကြောင့် https://t.co/hlN1PcmMhW pic.twitter.com/wfSKdrtpkj
- မMatthewဲချန်ပီယံ (@matthewchampion) မတ်လ 24, 2021
ယခုစူးအက်တူးမြောင်းတွင်ကပ်ထားသောကုန်တင်သင်္ဘောနှင့်ပတ်သက်သောမှတ်စု ၁၉ ခုကို ကျေးဇူးပြု၍ ခံစားပါ။
- ယူဂျင်းဝေ (@eugenewei) မတ်လ 25, 2021
- အားလုံးအတွက် ido vock (@idvck) မတ်လ 25, 2021
၃။ ကျွန်ုပ်၏ GP သို့မပို့ဘဲကျွန်ုပ်၏ GP သို့မည်သို့ပို့ရမည်နည်း။
- ဂျိမ်းစ်ဖဲလ်တန် (@JimMFelton) မတ်လ 25, 2021
- John W. Rich (Fake Tech Exec) (@Cokedupoptions) မတ်လ 24, 2021
ညွှန်ကြားချက်များအရအနည်းဆုံးလူ ၂ ယောက်လိုသည်ဟုကျွန်ုပ်ပြောသောအခါကျွန်ုပ်၏ IKEA ဗီရိုကိုတည်ဆောက်ရန်ကြိုးစားနေသည် pic.twitter.com/DpFESPXCTc
- Sophia Smith Galer (@sophiasgaler) မတ်လ 25, 2021
စူးအက်တူးမြောင်းလှေကိုစီးနင်းလိုက်ပါလာသူကိုတော့ sooooo ကပြောကြားခဲ့သည်။ သင်၏ကားရပ်နေသည်ကိုကမ္ဘာတစ်ခုလုံးမြင်ယောင်ကြည့်ပါ။ အရှက်ပစ္စည်းပစ္စယ
- amil (@amil) မတ်လ 24, 2021
7. အတိအကျနှစ်ခု x
- ဘရန်ဒီဂျင်ဆင် (@BrandyLJensen) မတ်လ 24, 2021
- Callum S (@SimpGanassi) မတ်လ 25, 2021
- ဇင်း Tsjeng (@misszing) မတ်လ 26, 2021
11. ရိုးရိုးရှင်းရှင်းလင်းလင်း: ဒါဟာရုံဖမ်းပါတယ်
လှေ? ဒီဟာရုံပဲ ပစ္စည်းတွေမသွားပါဘူး လှေကပ်နေဖို့မလိုအပ် ဒါပဲ။
- ဇ။ စ။ heisler (@hpheisler) မတ်လ 24, 2021
- 𝔐𝔞𝔤𝔫𝔢𝔱𝔰🧲 (@PerthshireMags) မတ်လ 24, 2021
- Mollie Goodfellow (@hansmollman) မတ်လ 26, 2021
- Abby Tomlinson (@twcuddleston) မတ်လ 26, 2021
15. Wow ငါသိပ္ပံကိုချစ်!
- ကေတီ Way (@ k80way) မတ်လ 25, 2021
မိန်းကလေးတစ် ဦး ရင်သားကိုဘယ်လိုထိတွေ့ရမလဲ
16. ငါဘာ x ကြိုက်လဲ
စူးအက်စ်မှာဒီသင်္ဘောရဲ့ကပ္ပတိန်တစ်ယောက်ဖြစ်ရမယ်၊ မင်းရဲ့ရုံးခန်းထဲကိုဖုန်းခေါ်ဖို့လိုတယ်လို့မြင်ယောင်ကြည့်ပါ။ 'omg kirsty, ငါဘာကြိုက်လဲ !! ငါသာသွား။ သူမ၏တူးမြောင်းထဲမှာမှီဝဲတယ်မဟုတ်ခဲ့! ငါ့ကိုဂရုစိုက်တယ် '
- ဘင်မီးခိုး (@bencsmoke) မတ်လ 25, 2021
စူးအက်တူးမြောင်းမှာကပ်နေတဲ့ကုန်တင်သင်္ဘောကိုသောကြာနေ့ကသင်ပျော်ရွှင်စွာနေ, သင်သည်ငါ၏မိန်းကလေးအကြီးအကဲ inspo x ဖြစ်သည်
- Arch (@Archhhh__) မတ်လ 26, 2021
နှစ်အနည်းငယ် Bitcoin နှင့် reddit တိုတောင်းသောရောင်းဝယ်မှုနှင့်အကြွေးက default လဲလှယ်ရေးအစီအစဉ်များနှင့်တစ်နှစ်သန်းအခြားအရာပြီးနောက်ငါကကြီးမားသောလှေတူးမြောင်းထဲမှာမှီဝဲသောကြောင့်, ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးအန္တရာယ်၌ကြားသိရန်အလွန်လန်းဆန်းရဲ့နားလည်ပြီးနောက်
- ဘရန်ဒီဂျင်ဆင် (@BrandyLJensen) မတ်လ 25, 2021
ဤအတောအတွင်းအပေါ် #SuezCanal pic.twitter.com/EWZ0bcH9p6
- မက်စ်ဂယ်လီယန် (@MaxGallien) မတ်လ 23, 2021
• ကောင်းပြီဒါဆို Rupi Kaur မှာ TikTok ရှိတယ်၊ ဒီမှာထူးထူးဆန်းဆန်းတွေထဲကတချို့ပါ
• ရုံ 23 သူတို့ဖြစ်သင့်သည်ထက်လမ်းရယ်စရာဖြစ်ကြောင်းတွစ် '' RIP ချစ်ကြလိမ့်မယ် ''